ပြည့်ဖြိုးတင်းကိတ်နေတဲ့အလှတွေနဲ့ စက်ဘီးစီးနေတဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုချပြလိုက်တဲ့ မေပန်းချီ – Shwe Myanmar
ပရိတ်သတ် ကြီးရေ မေပန်းချီက တော့ အမိုက်စား ခန္တာကိုယ်ကောက် ကြောင်း အလှတွေ နဲ့ တည်ငြိမ်ရင့် ကျက်တဲ့ မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆို င်ထားတဲ့ သူမဟာ နာမည်ရ မင်းသမီးတွေ ထဲ က တစ်လ က်ဆိုလည်း မမှားပါဘူးနော်။ ဗီဒီယို တွေခေ တ်စားခဲ့တဲ့ ကာလမှာ လည်း ပရိတ်သတ်တွေ တစ်ခဲနက် အားပေးမှု ဝန်းရံမှုတွေ ကိုရ ရှိခဲ့တာပါ။ သရုပ်ဆောင်ပို
င်းမှာဆိုရင်လည်း အပြစ်ပြောစရာ မရှိအောင် ဆေးစက် ကျရာအ ရုပ်ထင်အောင် အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်ပုံဖော်နိုင် သူတစ်ယောက် လည်းဖြစ် ပါတယ်နော်။ အရမ်းမိုက် တဲ့ ကော က်ကြောင်း အလှတွေကို ပေါ်လွင်စေ တဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ ဖက်ရှင်မျိုးလေးတွေ ကိုများသော အားဖြင့်ဝတ်တတ် တာကြောင့် ပုရိသတွေ ရဲ့ အာရုံစိုက် အားပေးမှုတွေကို
ရရှိ ထား ခဲ့ပါ တယ်နော်။ အမိုက်စား ခန္တာကိုယ်ေ ကာက်ကြောင်း အလှတွေ ပေါ်လွ င်နေတဲ့ ဖက်ရှင်အမိ အမိုက်တွေနဲ့အတူ ” ခ်စ္ခဲ့ဖူးလား ?ျေဖပါ ” ဆိုတဲ့ စာ သားေ လး နဲ့ပုံတွေကို တင် လာခဲ့ တာပါ။ အရမ်းလန်းတဲ့ မေပန်းချီ ရဲ့ ပုံလေးတွေကို ပရိသတ်ကြီး အတွက် ဝေမျှပေး လိုက် ပါတယ်နော်။
ပရိတျသတျ ကွီးရေ မပေနျးခြီက တော့ အမိုကျစား ခန်တာကိုယျကောကျ ကွောငျး အလှတှေ နဲ့ တညျငွိမျရငျ့ ကကျြတဲ့ မကျြနှာလေးကိုပိုငျဆို ငျထားတဲ့ သူမဟာ နာမညျရ မငျးသမီးတှေ ထဲ က တဈလ ကျဆိုလညျး မမှားပါဘူးနျော။ ဗီဒီယို တှခေေ တျစားခဲ့တဲ့ ကာလမှာ လညျး ပရိတျသတျတှေ တဈခဲနကျ အားပေးမှု ဝနျးရံမှုတှေ ကိုရ ရှိခဲ့တာပါ။ သရုပျဆောငျပို ငျးမှာဆိုရငျလညျး အပွဈပွောစရာ မရှိအောငျ
ဆေးစကျ ကရြာအ ရုပျထငျအောငျ အကောငျးဆုံး သရုပျဆောငျပုံဖျောနိုငျ သူတဈယောကျ လညျးဖွဈ ပါတယျနျော။ အရမျးမိုကျ တဲ့ ကော ကျကွောငျး အလှတှကေို ပျေါလှငျစေ တဲ့ ဆကျဆီ ကကြ ဖကျရှငျမြိုးလေးတှေ ကိုမြားသော အားဖွငျ့ဝတျတတျ တာကွောငျ့ ပုရိသတှေ ရဲ့ အာရုံစိုကျ အားပေးမှုတှကေို ရရှိ ထား ခဲ့ပါ တယျနျော။ အမိုကျစား ခန်တာကိုယျေ
ကာကျကွောငျး အလှတှေ ပျေါလှ ငျနတေဲ့ ဖကျရှငျအမိ အမိုကျတှနေဲ့အတူ ” ချစ်ခဲ့ဖူးလား ? ဖြေပါ ” ဆိုတဲ့ စာ သားေ လး နဲ့ပုံတှကေို တငျ လာခဲ့ တာပါ။ အရမျးလနျးတဲ့ မပေနျးခြီ ရဲ့ ပုံလေးတှကေို ပရိသတျကွီး အတှကျ ဝမြှေပေး လိုကျ ပါတယျနျော။
Previous PostPrevious ပန်းရောင်ဖက်ရှင်လေးနဲ့ အသည်းယားစရာကောင်းအောင် လှပလွန်းနေတဲ့ ဆုအိမ့်စံ
Next PostNext ဖြူဖွေးဝင်းမွတ်တဲ့ ပေါင်တံသွယ်သွယ်လေး တွေက အတိုင်းသား ပေါ်လွင်နေပြီး ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာ အရမ်းလှနေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်